एसियाड फुटबलका निम्ति नेपालको तयारी कस्तो ? के नेपालले बनाउला नया इतिहास !! - Experience Best News from Nepal
एसियाड फुटबलका निम्ति नेपालको तयारी कस्तो ? के नेपालले बनाउला नया इतिहास !!
एसियन फुटबलमा आज नेपालले समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा जापानको सामना गर्दैछ । नेपालले पहिलो खेलमै बलियो टोली जापानको सामना गर्न लागेको हो ।
इन्डोनेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । यस समूहमा नेपालसँगै पाकिस्तान, भियतनाम र जापान परेका छन् ।
आज नेपालले जापानविरुद्ध यु–२२ टोली उतार्दैछ । तर, ऊसँग ३ जना राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी पनि हुनेछन् । ३ जना २३ वर्षभन्दा माथिका खेलाडी राख्न पाइने नियमअनुसार नेपालको सिनियर टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, विशाल राई र रोहित चन्द जापानविरुद्धको खेलमा हुनेछन् ।
तर, जापानले भने नेपालविरुद्ध यु–२१ का खेलाडी उर्तौछ । खेल इन्डोनेसियाको सिकाराङस्थित बिबावा मुक्ति रंगशालामा नेपाली समयअनुसार आज साँझ ५ः४५ बजेदेखि हुनेछ ।
एसियन फुटबलमा हालसम्म नेपालले जापानलाई हराउन सकेको छैन । कूल तीनपटक जापानसँग खेल्दा तीनपटकै नै नेपालले फराकिलो हार व्यहोरेको छ ।
नेपालले पहिलोपटक एसियन खेलुकदमा सन् १९८६ मा जापानविरुद्ध उत्रिँदा ५–० ले पराजित भएको थियो । त्यसपछि सन् १९९२ मा थाइल्यान्डमा भएको खेलमा नेपाल जापानसँग ५–० ले नै स्तब्ध भएको थियो । पछिल्लोपटक सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियामा भएको खेल पनि नेपालले ४–० ले खेल गुमाएको थियो ।
यस्तो इतिहास भएको नेपाल आज एसियन फुटबलको ‘पावर हाउस’ भनेर चिनिने जापानविरुद्ध उत्रिँदा ठूलो दबाबमा हुनेछ । उससले जापानविरुद्ध आफ्नो खराब इतिहासको क्रम तोड्न पनि हरहालतमा जितका लागि खेल्नुपर्छ ।
तर, नेपाललाई जापानविरुद्ध खेल्न भने सहज हुनेछैन । इन्डोनेसिया पुग्नुभन्दा अघि नेपाली टोलील्े थाइल्यान्डमा १० दिन प्रशिक्षणे थियो । त्यसक्रममा उसले त्यहाँ दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलको थियो । जहाँ नेपालले पुलिस टेरोसँगको खेल १–० ले हर्दा दोस्रो खेलमा थाइल्यान्डको यु–२० टोलीसँग ४–० ले हारेको थियो ।
हारको मानसिकताबाट गुज्रिरहेको नेपालले बलियो टोली जापानविरुद्ध जादु देखाउला ? यो हेर्न बाँकी छ । आज नेपाली टोलीको कप्तानी सिनियर टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङले गर्दैछन् ।